Best GZL100 akọrọ granulator emeputa na ụlọ ọrụ | Keyuan
Kpọọ Anyị: 0311 - 82239331
Zitere anyị ozi: keyuan@drygranulating.com
Ngwa ndị ọzọ
Ebe nri nri ntụ ntụ
Moveable ndoli -eweli igwe
Ofu ihe na -ebuli igwe
Gzl260 akọrọ granulator
GZL100 akọrọ granulator
Igwe ahụ na-anabata sistemụ inye nri okpukpu abụọ yana ụdị ọmarịcha cantilever, nke na-eme ka ihe nhazi dị iche iche dị mma yana ọnụego ihe ịga nke ọma na obi ụtọ nke ukwuu;
A na-eji ihe nlereanya a eme ihe maka mmepe na nyocha ụdị ọgwụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ nyocha ọgwụ na imepụta obere nkwadebe ọgwụ ọdịnala China. Nri kacha nta bụ 20g. Ngwongwo na -emezighị emezi, nke a na -ejikarị na -emepụta ọgwụ, nri. kemịkalụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Ọ dabara na ihuenyo mmetụ LCD na ọtụtụ teknụzụ njikwa akpaka iji meziwanye mgbanwe na nchekwa nke akụrụngwa; Igwe ahụ niile bụ nke igwe anaghị agba nchara, yana mpaghara na-agagharị na-ekewapụ na mpaghara ọrụ, nke na-achọpụta mmepụta dị ọcha ma kaa akara site na powderto granule. , na akụkụ kọntaktị ihe niile dị mfe ịhazi na ịdị ọcha; Nrube isi zuru oke na ihe GMP chọrọ maka imepụta ọgwụ kwa afọ. Mbelata nyocha na mmepe mmepe: rollers nke nwere mmiri jụrụ oyi nwere ihe eji arụ ụlọ maka ntinye na ọpụpụ, yana ihe nnwale anaghị ekpo ọkụ na-emelite usoro mwepụ, nke na-emetụta ihe onwunwe.
A na -eji igwe ahụ mee ntụ ntụ a mịrị amị ka ọ bụrụ njupụta na akụrụngwa nnwale nha, nke na -enye irighiri ihe dị mma maka imepụta mbadamba na akụrụngwa ndochi capsule. A na -ejikarị ya na nyocha na mmepe nke ụdị usoro onunu ogwu na imepụta obere nkwadebe na API. Iji nye mkpụrụ ndụ ihe nketa mmiri dị mma maka ịme mbadamba na akụrụngwa ndochi capsule. Ngwaahịa ahụ na -emezu ihe GMP chọrọ maka imepụta ọgwụ.
Akọrọ granulation nwere uru nke mfe usoro, ala oriri ike na -adaba adaba njikọ na ẹdude usoro. Ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere mmiri mgbochi mmiri, ọ nwere uru nke enweghị mkpa ihe nragide na ihe mgbaze, na enweghị nsogbu nke oke okpomọkụ na mgbake mgbaze. Enwere ike mezue usoro granulation site n'otu nri, nke na -azọpụta ọtụtụ ndị ọrụ na oghere ala.
Nke gara aga: GYC200 akọrọ granulator
Osote: GZL120 akọrọ granulator
Chemical Equipment kpọrọ nkụ Granulator
Nkpọrọgwụ kpọrọ nkụ na mmiri oyi
Usoro ịkpọrọ nkụ
Mkpokọta ala akpọrọ nkụ granulation
GYC100 akọrọ granulator
GYC200 akọrọ granulator
Gzl200 akọrọ granulator
GZL150 akọrọ granulator
GZL120 akọrọ granulator
ụlọ ọrụ mpaghara tangqiaotang zhang jiagang city china